Iincwadi zemibongo ezibalaseleyo | Uncwadi lwangoku
Enkosi kwi nomphakathi, imibongo kubonakala ngathi iyabushiya ubuthongo bayo obude ukuze iphinde ibuye kwindawo yayo efanelekileyo. Isikhundla esakhe sangcwaliswa ziimbongi ezinkulu kunye nezithethi ezifumanise iivesi indlela egqibeleleyo yokuchaza umhlaba, ukwenza iindawo ezininzi zingcangcazele kwaye ziguqule imvakalelo ibe ngamazwi. Ezi ezona ncwadi zemibongo zibalaseleyo bachaza ukuvela kobugcisa obungunaphakade obungapheliyo, nangona kunjalo, obungayeki ukuzihlaziya.
1 Iincwadi zemibongo ezigqwesileyo
1.1 I-Iliad, nguHomer
1.2 IiRhymes kunye neeMbali, nguGustavo Adolfo Bécquer
1.3 Iincakuba zengca, nguWalt Whitman
1.4 Imibongo, nguEmily Dickinson
1.5 Imibongo engamashumi amabini yothando kunye nengoma enomdla, kaPablo Neruda
1.6 Imbongi eNew York, nguFederico García Lorca
1.7 IAriyeli nguSylvia Plath
1.8 I-Poetic Anthology, ebhalwe nguMario Benedetti
1.9 Ezinye iindlela zokusebenzisa umlomo wakho, nguRupi Kaur
Iincwadi zemibongo ezigqwesileyo
Iliad (Ithala leencwadi elitsha ...
Ingqungquthela yesiGrike ethi Ndingayitshintsha ngonaphakade incwadi yasentshona Kwakunjalo Umbongo wokuqala omkhulu yeengoma zethu. Nangona umhla wokupapashwa kwawo ungaziwa, kukholelwa ukuba I-Iliad imihla ukusuka ngaxa lithile ngenkulungwane ye-XNUMX BC kwaye iqulathe Iivesi ezili-15.693 Ebonisa ingqumbo ka-Achilles kunyaka ophelileyo weMfazwe yeTrojan, isixeko esaziwa njengeIlion, ngesiGrike. Iklasikhi epheleleyo.
IiRhymes kunye neeMbali, nguGustavo Adolfo Bécquer
Iintsomi neeRymes (Igumbi lokufundela ...
Unozakuzaku we ezothando awayezama ukuyivulela imisinga yokubhala, uBécquer wayehlala kakubi eMadrid ixesha elininzi lobomi bakhe engakhange abone umsebenzi wakhe opapashiweyo. Iingoma abenza lo mqulu bapapashwa ngabahlobo bakhe kwiminyaka emva kokubhubha kwakhe, kungekudala emva komlilo waphantse wabacima. Iirhafu Okubandakanyiweyo kwapapashwa kubomi bonke bombhali. Ubukho obondliweyo yimixholo enje uthando, ukufa okanye izingqinisiso Kula ncwadi kanye uBécquer ayibhalileyo kwaye ngubani ofumana kumaphepha ale ncwadi ukuvulela kwihlabathi leemilo ezintsha kunye nemibala.
Ngaba ungathanda ukufunda ifayile ye- Iimvano-ndaba kunye namaNqaku eBeccquer?
Iincakuba zengca, nguWalt Whitman
Amagqabi engca ...
Ngamxhelo mnye kuthathwa njenge imbongi enkulu yaseMelika lonke ixesha, uWhitman usebenze Amagqabi engcaNgexesha elininzi lobomi bakhe, ukuze inguqulelo yokuqala yahlengahlengiswa amatyeli aliqela kuhlelo ezahlukeneyo. Ekugqibeleni, imibongo yokuqala yahlangulwa, ukuze kugcinwe ukungxamiseka kombhali owayethetha ngaye ubudlelwane bakhe nendalo, kunye nexesha awayenokuthi aphile ngalo nokuba ngumongameli ofana no-Abraham Lincoln awamnikezela kuye. Ngokungafaniyo nobumoya obugqithisileyo kwezothando, uWhitman wayesazi indlela yokunika imibongo yenkulungwane ye-XNUMX ngomthamo kunye nefom, yezinto eziphathekayo eziqulethwe yindoda ekwaziyo ukucinga nokuphila.
Imibongo, nguEmily Dickinson
Imibongo (Austral Poetry)
Ngaphandle kwe- ngaphezulu kwe-1800 imibongo ukuba i-American Emily Dickinson yabhala esaphila, bambalwa kubo abapapashiweyo Ngapha koko, abo bakubonayo ukukhanya ngexesha lobomi bombhali bahlengahlengiswa ngabahleli abathile abangazange babe nobuganga bokubonisa umhlaba imibongo eyahlukileyo yalo mfazi, itshixelwe ixesha elininzi lobomi egumbini. Kwakungayi kuba kukusweleka kwakhe, ngo-1886, xa udadewabo omncinci wafumanisa yonke imibongo kwaye wayazisa kwihlabathi. Ukhuliswe yiBhayibhile kunye nokuhlekisa kwaseMelika, ukuhamba phakathi ukufa nokungafi eyamkhuthaza kakhulu, uDickinson uthathwa njengomnye we amanani amakhulu wombongo waseUnited States.
Funda ifayile ye- Imibongo kaEmily Dickinson.
Imibongo engamashumi amabini yothando kunye ...
«Ndiyathanda xa uthule kuba ufana ungekhoyo. »
Enye ye Izicatshulwa ezidumileyo zemibongo ezivela kwiileta zaseSpain Inxalenye yale ncwadi, eyokuqala nguNeruda kwaye yapapashwa ngumbhali waseChile ngo-1924 eneminyaka eyi-19 kuphela. Sebenzisa ukusebenzisa ivesi yaseAlexander kunye nendlela yakhe awazama ngayo ukuba kude nobunyani obabusebenza kwimisebenzi yakhe yakuqala, le ncwadi yenziwe ngemibongo engamashumi amabini engenagama neyokugqibela, Ingoma yokuNqwenela, eshwankathela iimvakalelo zombhali ngothando lwakhe lobutsha. Enye ye eyona misebenzi ibalulekileyo ngeSpanish ngenkulungwane yama-XNUMX, ngokuqinisekileyo.
Awuyi kuba nakho ukuyeka ukufunda Imibongo engamashumi amabini yothando kunye nengoma enomdla.
Imbongi eNew York, nguFederico García Lorca
Imbongi eNew York: ...
Nge-18 ka-Agasti ka-1936, uFederico García Lorca wadutyulwa ndaweni ithile phakathi kweViznar kunye neAlfacar, eGranada, eshiya njengelona lifa liqokelelekileyo imibongo yeAndalusia awayeyithanda kakhulu kwaye esebenza ngathi Imbongi eNew York. Ipapashwe emva kwexesha ngo-1940 kwiinguqulelo ezimbini zokuqala ezahlukeneyo kodwa engangqinelaniyo ngenxa yezizathu ezicacileyo, umsebenzi omkhulu kaLorca ukudityaniswa kombhali, yendoda eyathi kwisixeko saseNew York apho yayihlala khona phakathi konyaka we-1929 nowe-1930 yazama ukuvusa ubuhle obumsulwa, kude noshishino, ubungxowankulu kunye nobuhlanga owayelawula eUnited States. Umsebenzi apho uLorca, ngokudakumba ngelo xesha, evulela kwihlabathi lonke ukuzama ukufumana eyona nguqulelo.
IAriyeli nguSylvia Plath
Ngaphambi kokuzibulala ngo-1963, uSylvia Plath wagqiba ingqokelela yemibongo enesihloko ariel ukuba ipapashwe ngumyeni wakhe kunye nomncedisi kuncwadi, UTed uyangana, emva konyaka. Impikiswano yeza xa umsebenzi walungiswa nguHughes, ngubani isuse eminye yemibongo ekhoyo kwaye yongeza enye engashicilelwanga ngenjongo yokunciphisa ukuphindaphinda umsebenzi, owawugxekwa kwaye ukhuselwe ngokulinganayo ziingcali. Umsebenzi, ukujija okuphawuleka ngakumbi xa kuthelekiswa nomsebenzi wangaphambili kaPlath, uxhomekeke kwindalo njengendwangu yesimbo sombhali.
I-Poetic Anthology, ebhalwe nguMario Benedetti
I-Poetic Anthology. Ye...
Umbhali webali elifutshane wase-Uruguay kunye nombhali wenoveli, UBenedetti wanikezela nenxalenye enkulu yobomi bakhe kwimibongo. Ubomi bemihla ngemihla, obudunyiswa njengenjini ye-epic kwaye inongwe ngothando kunye nezopolitiko, uburharha kunye nokubonisa, abasetyhini kunye neenkumbulo, zigcwele amaphepha oku I-anthology yesihobeyapapashwa ngo-1984. Olona khetho lufanelekileyo xa kufikwa ekufikeleleni kwezona vesi zibalaseleyo zombhali kwivolumu enye.
ezinye iindlela zokusebenzisa ...
Yonke le nto iqale kwiakhawunti Instagram Apho imbongi yaseCanada yaseIndiya uRupi Kaur waqala ukupapasha izicatshulwa zomsebenzi wakhe. Kwiinyanga kamva, kwaye emva kokuba ifoto yombhali ishiya umkhondo wokuba sexesheni ebhedini eyaguqula amanethiwekhi onxibelelwano, uKaur wapapasha iincwadi ezimbini: Ubisi kunye nobusi (Ezinye iindlela zokusebenzisa umlomo wakho, kwilizwe lethu) kwaye Ilanga neentyatyambo zalo, imisebenzi edibanisa imibongo yezi zizukulwane kunye nezizayo apho kungabikho ukunqongophala kwezalathiso kwimixholo enje ubufazi, ukukhathazeka kwentliziyo okanye ukufudukela kwelinye ilizwe.
Yintoni eyenzelwe wena Ezona ncwadi zemibongo zibalaseleyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi zemibongo ezibalaseleyo
Ngaphandle kweVallejo olo luhlu alunakuthembeka